Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Hotel McAlpin miaraka amin'ny orkesitra sy hopitaly misy azy » Page 2
Tamin'ny 1920, The McAlpin Hotel dia nampiantrano izay mety ho fandaharana voalohany tamin'ny hotely New York. Ny Army Signal Corps dia nandamina ny fampielezam-peo nataon'ny mpihira Luisa Tetrazzini avy tao amin'ny efitranony tao amin'ny hotely. Tetrazzini (1871-1940) dia soprano lyric coloratura soprano izay nanana laza malaza tany Amerika tamin'ny taona 1900-1920. Tamin'ny 1922, ny McAlpin dia lasa iray tamin'ireo voalohany trano fandraisam-bahiny mampifandray radio-sambo amin'ny morontsiraka amin'ny rafitry ny findainy. Ny trano fandraisam-bahiny no taty aoriana no voalohany nanome ny taratasin'ny radio WMCA tamin'ny 1925.
Tamin'ny 1947, Jackie Robinson, mponina monina amin'ny rihana faha-11, dia nahazo antso an-tariby avy amin'ny Brooklyn Dodgers izay hanova an'i Amerika mandrakizay amin'ny alàlan'ny fahatongavany ho mpilalao amerikana amerikana voalohany amin'ny ekipa baseball Major League.
Ny Marine Grill ao amin'ny hotely dia noheverina ho iray amin'ireo atitany tsy mahazatra ao an-tanànan'i New York noho ny "grotto mivelatra amin'ny fambolena polychrome terra cotta tsara tarehy noforonin'ny mpanakanto Frederick Dana Marsh." Tamin'ny taona 1970, nanidy ny trano fisakafoanana ny tompona trano ary miahiahy ny amin'ny ho avin'ny zavakanto ireo mpiaro ny tantara. Ny fahatahoran-dry zareo indrindra dia tanteraka rehefa nahita an'i Susan Tunick, filohan'ny Friends of Terra Cotta, izay tsy mitady vola, nahita ireo mpanary fako ivelan'ny trano fandraisam-bahiny feno sombin-drindrina. Nahomby ny ezaka famonjena taty aoriana rehefa namboarina indray ny sary hosodoko teo ambany fanaraha-mason'ny MTA Arts for Transit Program ary natambatra indray izy ireo isan-karazany toy ny piozila goavambe nandritra ny fahavaratra iray nataon'ny vondrona mpianatry ny oniversite. Tamin'ny taona 2000, ny rindrina vita amin'ny rindrina dia napetraka tao amin'ny Station Fulton Street, niaraka tamin'ny vavahady vy voaravaka nandravaka ny fidirana mankao amin'ny Marine Grill.
Tamin'ny faran'ny taona 1970 dia navadika ho trano fanofana 700 ny trano ary ny taona 2001 ho trano fandraisam-bahiny. Miasa amin'ny anarana hoe Herald Towers izy izao.